Liiskani article baxay 8 su'aalaha ugu-weydiiyo oo ku saabsan gurmad Samsung Kies. Read More >>
Adeeg geeyo Music ayaa music jaban oo la awoodi karo in kuwii ku caashaqi jiray music. Iyadoo adeeggan, kuwii ku caashaqi jiray music hadda ay helaan malaayiin music for Times ah bil kasta oo sida caadiga ah kharash $ 9.99 Read More >>
Habka ugu fiican ee muusiko dhegayso oo isticmaalaya adeega Spotify geeyo music waa adigoo isticmaalaya app. App The kuu ogolaanayaa inaad muusiko dhegayso ka Spotify halkaas oo weligoodba aad u tagto. Waxaa laga helaa dhammaan ugu weyn ee mobile Read More >>
Kies leedahay faaidooyin marka ay timaado telefoonnada gacanta Samsung. Laakiin marka ay timaado in la rakibo on Mac waxa uu leeyahay dhowr arrimood oo ay tahay in wax laga qabto. Read More >>
Miyaad taqaan update Samsung casriga ah iyadoo la isticmaalayo Kies Samsung? Haddii aadan, ha ka welwelin ha! Halkan waxaa ku qoran talooyin ku saabsan sida loo isticmaalo Kies Samsung, Read More >>
Sida loo uninstall Kies on Windows iyo Mac
Ma taqaanaa Kies uninstall on Windows iyo Mac ah? Haddii aadan, ha ka welwelin ha! Halkan waxaa ku qoran talooyin ku saabsan Kies uninstall on Windows iyo Mac. Read More >>
In this article, waxaan qaadi doonaa eegno lixda waxyaalaha ugu muhiim ah in aad, sida user ah, waa in la ogaado oo ku saabsan Samsung Kies 3. Read More >>
Maqaalkani waxa ujeedadiisu on laylis ugu dadka isticmaala ee aqoon u leh Samsung Kies 2.6 si ay u isticmaali kartaa si aad u hesho dhibaatada la xalin samaynta. Read More >>
Waxaad hadda wareejin karaan macluumaadka oo dhan ka telefoonka HTC jir in qalab cusub Android iyadoo hal click iyo in aad hab ammaan ah oo khatar la'aan 100% ah. Read More >>
Sida shirkad kale Spotify sidoo kale waa madal ugu fiican in mar walba lagu xaqiijiyey in user helo adeegyada ugu fiican oo loo isticmaalo by malaayiin adduunka oo dhan madal ay Android ie-aad ka dib markii Read More >>
iibsato barnaamijyadooda Android ayaa kaliya noqday wax badan ka sahlan. Marka saabsan music, waxaan ka heli barnaamijyadooda Android on telefoonada Android aad u anfacaya, Top10 Android Apps si ay u iibsadaan muusikada: Read More >>
Waxay qaadataa in ka yar hal daqiiqo si loo hubiyo in gool habka iyo user helo heeso ka soo dejisan in telefoonka mobile dib u dhac kasta oo aan soo socda ama geeddi socodka ku kaaftoomi lacag la'aan ah. Read More >>
Samsung waxa uu qabtay shaqo aad u fiican horumarinta qalabka ay sanadihii la soo dhaafay, la xaqiijiyey baahida sii kordhaysa ee qalabka Samsung. Read More >>
Mawduucan waxaa inta badan ka hadlaan 10 Manager ugu sareeya Samsung Device, taas oo ka kooban 4 qalab Windows, Mac 4 iyo 2 OS Android. Read More >>
Haddii aad rabto in aad tirtirto barnaamijyadooda ku saabsan qalab Samsung in Dufcaddii, waxaad isku dayi kartaa this Tababaraha app Android. Tallaabooyinka waa iska sahlan. Read More >>
Ma rabtaa in la rakibo barnaamijyadooda ku Samsung Galaxy? Maqaalkani waxa uu inta badan kuu sheegayaa hab si cadaalad ah fududahay in la rakibo barnaamijyadooda badan oo ku saabsan qalabka Samsung Galaxy. Read More >>
si aad u bedelan kartaa ka qalab Samsung jir in telefoon kasta oo cusub Blackberry mar kasta iyo meel kasta oo aad rabto. Read More >>
Si aad u hesho xogta ka mid ah aad Sony si aad u computer, waxaan noqon doonaa soo bandhigid utility ah software free kala ah, Wondershare MobileGo. Read More >>
Tani waa habka ugu caansan loo isticmaalaa in lagu xog ka mid qalab wareejiyo kale. Waa habka hal-click fudud Wondershare MobileTrans. Read More >>